Suuqa kala iibsiga Maanta: Haaland oo Noqonaya Bartilmaameedka ugu Sareeya ee Manchester United, Barcelona oo lasoo Wareegeysa Dani Olmo, iyo Qodobo kale | Warkii.com:-world news today for international news and videos from Europe, Asia, Africa, the Middle East and the Americas.
Home Ciyaaraha Suuqa kala iibsiga Maanta: Haaland oo Noqonaya Bartilmaameedka ugu Sareeya ee Manchester...
Suuqa kala iibsiga Maanta: Haaland oo Noqonaya Bartilmaameedka ugu Sareeya ee Manchester United, Barcelona oo lasoo Wareegeysa Dani Olmo, iyo Qodobo kale
Weeraryahanka Borussia Dortmund iyo xulka Norway Erling Braut Haaland, oo 21 jir ah, ayaa noqon doona bartilmaameedka ugu sarreeya Manchester United xagaaga soo socda inkasta oo uu 36 jirka reer Portugal ee Cristiano Ronaldo ka yimid Juventus. (ESPN)
Guddoomiye ku-xigeenkii fulinta ee Manchester United ee xilka ka sii degaya Ed Woodward “ayaa kaalin muhiim ah ka qaatay helitaanka Ronaldo. (Manchester Evening News)
Barcelona ayaa isku dayi doonta inay mar kale la soo saxiixato xiddiga qadka dhexe ee reer Spain Dani Olmo, oo 23 jir ah, bisha Janaayo ka dib markii dalabkii ugu dambeeyay ee 50 milyan ginni ay diiday RB Leipzig . (Dailymail)
Marna ma jirin fursad ay Barca kula soo saxiixan karto weeraryahanka reer Portugal Joao Felix, oo 22 -jir ah kana yimid Atletico Madrid , inkasta oo xiddiga reer France Antoine Griezmann, oo 30 -jir ah, uu dib ugu soo laabanayo kooxda. (Fabrizio Romano)
Leicester , Southampton iyo Nottingham Forest ayaa dhammaantood dalabyo ka gudbiyay 21-jirka daafaca midig ee Ingiriiska Djed Spence kana tirsan Middlesbrough . (Waqooyiga Echo)
Tababaraha Tottenham Nuno Espirito Santo ayaa u xaqiijiyay saxiixa cusub ee Emerson Royal oo 22 jir ah inuu door muhiim ah ka ciyaari doono kooxda, ka hor inta uusan daafaca reer Brazil ogolaanin inuu ka tago Barcelona . (Marca)
Manchester United , Liverpool iyo Arsenal ayaa qarka u saaran inay ku dagaalamaan 25 jirka Brighton iyo qadka dhexe ee reer Mali Yves Bissouma bisha Janaayo. (Mirror)
Xiriirka ka dhexeeya tababaraha Newcastle Steve Bruce iyo milkiilaha Mike Ashley ayaa maraya meeshii ugu hoosaysay ka dib niyad jabkuu suuqa kala iibsiga ah, taas oo keentay in Magpies ay seegaan bartilmaameedkii muhiimka ahaa ee amaahda, Leicester iyo England U21 qadka dhexe Hamza Choudhury. (Telegraph)
Ciyaaryahanka khadka dhexe ee kooxda Arsenal Martin Odegaard, oo 22 jir ah, kaasoo kooxda uga soo biiray Real Madrid xagaagan, ayaa sheegay inuusan jeclayn inuu arko kaamirooyinka Amazon ee ku wareegsan kooxda. Gunners ayaa ah kooxdii ugu dambaysay ee lagu soo bandhigo documentary dhan. (Dailymail)
Gunners ayaa bilaabeysa inay ka qoomameyso saxiixa 72 milyan ginni ee Nicolas Pepe, oo 26 jir ah, oo ay kala soo wareegtay Lille 2019 ka dib markii xiddiga reer Ivory Coast uu si niyad jab leh ku bilowday xilli ciyaareedka. (Mirror)
Barcelona ayaa qarka u saaran inay qandaraas cusub u soo bandhigto garabka reer France Ousmane Dembele oo 24 jir ah. Hadda wuxuu ka soo kabanayaa dhibaato muruqa ah. (Goall)
Previous articleMuxuu ka dhashay dagaal siyaasadeedka ‘hantida guud’ ee Farmaajo iyo Rooble 02/09/2021
Next articleWararkii ugu dambeeyey dil iyo dhaawac Soomaali loogu geystay Canada